Special ID 2013 2013
Two Moon Junction (1988) 1988
The Wrestler 2008 2008
Avengers: Endgame(2019) 2019
Peel 2019 2018
Svaha: The Sixth Finger (2019) 2019
R.I.P.D. 2013 ဒီကားကတော့ ၁၉ ၉ ၀ ကျော်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Man In Black နဲ့ပုံစံတူတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်… Deadpool မင်းသားဖြစ်တဲ့ Ryan Reynolds ကရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့လက်တွဲဖော်လုပ်ကြံမှု့ကြောင့် စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်… သူသေဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ သူ့ကို R.I.P.D လို့ခေါ်တဲ့ Rest In Peace Department ကနေ သူ့ကို အမှု့လိုက်ဖို့အတွက်ပြန်လည်ဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်… R.I.P.D ရဲ့အမှု့တွေကတော့ ငရဲပြည်ကနေလွတ်လာတဲ့ လူယောင်ဆောင်ထားတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို လိုက်လံဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်… ဒီလိုလိုက်လံစုံစမ်းရင်း ထူးဆန်းတဲ့ အကောင်တွေ ကမ္ဘာမြေပြင်ကို ကျလာမှာကို နောက်ဆုံးမှာတော့ တားဆီးရပါတော့တယ်…. သူတို့ဟာ တကယ့်လူ့ဘ၀ထဲကိုဝင်တဲ့ အခါ လက်ရှိရုပ်သွင်ပြင်နဲ့ဝင်ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ သူတို့ရဲ့ ID Card မှာပါတဲ့ ရုပ်နဲ့ဝင်ရပါတယ်… ဒါကြောင့် သူများတွေအမြင်မှာတော့ သူတို့ဟာ တခြားပုံဖြစ်နေတတ်ပါတယ်.. အက်ရှင်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ အိမ်မှာနေရင်းပိတ်ရက်မှာအပျင်းဖြေဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်… Credit By Channel Myanmar Original Link https://channelmyanmar.org/r-i-p-d/
IMDB: 5.6/10 108,415 votes
A Good Day to Die Hard 2013 ခရစ်စမတ်နဲ့ နယူးရီးယားနီးလာလို့ ဘာဇာတ်ကားကြည့်မလဲဆိုရင် ကျွန်တော်ကတော့ Die Hard ဇာတ်ကားတွေကိုပဲ ပြေးမြင်ပါတယ်။ မင်းသားကြီး ဘရုစ်ဝီလီ ရဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတွေလို့ဆိုရင်လဲ Die Hard ဇာတ်ကားတွေကိုပဲ အရင်ဆုံးပြေးမြင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော် ကလေးဘဝကတည်းက ကာတွန်းဒီရဲဂျာရဲ့ ကာတွန်းတွေဖတ်ရင်း ဒီဇာတ်လမ်းတွေကိုရင်းနှီးနေပါတယ်….နည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ ဇာတ်ကားတွေကိုမျက်မြင်ကြည့်ရတော့လဲ ထိုင်ရာမထကြည့်မိတာချည်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် တုံးတိုက်တိုက်ကျားကိုက်ကိုက် စိတ်ထဲရှိသလိုပြောတတ်တဲ့….. အကြောက်အလန့်ကင်းတဲ့….. ဂျွန်မက္ကလိန်းဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ကို ပြသနာတွေ အန္တရာယ်တွေကြုံတိုင်း..သိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်လာတိုင်း အမှတ်ရမိတာ အမှန်ပါ။ Die Hard ဇာတ်ကားတွေဟာ အခုချိန်ထိ စုစုပေါင်း ၅ ကားထွက်ထားပါတယ်။တစ်ကားနဲ့တစ်ကားဟာ အနည်းငယ်တော့အဆက်အစပ်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့် ၅ ကားလုံးကိုစုစည်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။တစ်ကားချင်းစီရဲ့အညွှန်းတော့မပေးတော့ပါဘူး။မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ဖူးပြီးသားဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဂျွန်မက္ကလိန်းရဲ့ အရသာကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လည်ခံစားကြည့်ကြပါဦး။သေချာပေါက် အရသာရှိနေဦးမှာပါ။ BluRay 1080p 5.1 Audio နဲ့ ပြန်လည်တင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Credit By Channel Myanmar Original Link https://channelmyanmar.org/a-good-day-to-die-hard-2013/
Special ID 2013 အက်ရှင်ကား ဖိုက်တင်ကား ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်မင်းသား Donnie Yenရဲ့ ဇာတ်ကားလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာတရားမ၀င် မှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေသောင်းကျန်းနေတဲ့ကာလမှာရဲတွေက အရေးယူဖို့သက်သေရှာဖွေတဲ့အနေနဲ့ ချန်ကျစ်လုံကို သူလျိုအဖြစ်စေလွှတ်ထားခဲ့တယ်..ငယ်ငယ်ကတည်းက ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ချန်ကျစ်လုံတစ်ယောက် သူလျိုဘ၀မှာဘယ်လိုမျိုးဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ရမလဲမှောင်ခိုဂိုဏ်းကရောသူ့ရဲ့ဘ၀အမှန်ကိုသိရှိသွားမှာလားဒါ့အပြင်လူသတ်မှုကြီးတခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ချန်ကျစ်လုံတစ်ယောက်ဘယ်လိုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါဟောင်ကောင်အက်ရှင်ကားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအက်ရှင်အပိုင်းကတော့ အထွေအထူးပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းပြီးသားမို့ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုပါTranslated & Review By Ei Pyae Encoded By LK Credit By Channel Myanmar Original Link https://channelmyanmar.org/special-id-2013/
Olympus Has Fallen 2013 ကြည့်မိတာနဲ့ထိုင်ရာကမထပဲ ကြည့်ချင်နေမယ့်ဇာတ်ကားတစ်ကားကို Bluray 1080p 5.1 CH နဲ့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Mike ဟာ U.S. Army Ranger ကနေ သမ္မတ ကြီးရဲ့အထူးလုံခြုံရေး ခေါင်ဆောင် တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ သူပါ။Mike ဟာ သမ္မတကြီးရဲ့ အထူးလုံခြုံရေး တာဝန်တင် မကပဲသမ္မတကြီးရော သမ္မတကြီး မသားစု နဲ့ပါ မိသားစု ဝင်တစ်ယောက် ကဲ့သို့ရင်းနှီး နေသူလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Christmas ညတစ်ည မှာတော့သမ္မတကြီးနဲ့ သူ့ရဲ့ မိသားစုတို့ ညစာ စားပွဲ တစ်ခု တတ်ရောက်ဖို့Mike က ဦးဆောင်ပြီး ထွက်ခွာ လာခဲ့ပါတယ်။Christmas ညတစ်ည ဖြစ်တာနဲ့ အညီ နှင်းတွေက အရမ်းကျ နေပြီးလေတွေလဲ အရမ်းတိုက် နေပါတယ်။ လေတွေလဲ အရမ်းတိုက် နေပါတယ်။ကားကို သတိထား မောင်းနေပေမယ့်လဲ မထင်မှတ်ပဲ သမ္မတကြီးကားရှေ့ခန်းကို သစ်ပင် ...
IMDB: 6.5/10 233,781 votes
Two Moon Junction (1988) Two Moon Junction(1988)တောင်ပိုင်းရဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ကြီးပါတဲ့ မိသားစုတစ်ခုက Aprilဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအချိုးအကွေ့ကတော့ ဘွဲ့ရပြီး မကြာခင် ဆောင်တော့မယ့် သူ့မင်္ဂလာဆောင်ရက်ကလေး မတိုင်ခင်မှာ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အကြောင်းကတော့ ထရပ်ကားတစ်စီးပေါ်မှာ ခွေးတစ်ကောင်နဲ့ပဲ အမြဲအတူရှိနေတတ်တဲ့ လေလွင့်လူတစ်ယောက် သူ့ဘဝထဲဝင်လာခြင်းပါပဲ။ဆရာကြီးပီမိုးနင်း မိန်းမစိတ်ကျမ်းထဲထည့်ရေးဖူးသလို မိန်းမစိတ်ဟာ ဆန်းပါတယ်။ သူုပြခဲ့တဲ့ ဥပမာဆိုရင်တော့.. “မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ပုံပျက်ပန်းပျက်ရုပ်ဆိုးပြီး ဗလကောင်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို လှမ်းအမြင်မှာ အလိုလိုချစ်သွားပြီး အနီးကပ်မှ သူ့ယောကျာ်းမျက်နှာဒဏ်ရာရလာတာမှန်း သိရတော့ စိတ်မပါတော့တာမျိုးပါ”။ အရာရာရွှေအတိကျပြီးခဲ့တဲ့အနာဂတ်ရယ် ဆန္ဒအလိုလိုက်မှုတွေရယ် ကြားမှာ ဂုဏ်သရေရှိပညာတတ်Aprilဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကလေကချေ အရိုင်းအစိုင်းတစ်ကောင်ကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံတွေကတော့ တကယ့်ကို နားလည်ရခက်ခက်ပါပဲ။ မိန်းမဆိုတဲ့ ကျမ်းကြီးကိုလူအတော်များများကတော့ အနှေးနဲ့အမြန်လေ့လာရမှာပါပဲ…ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ နားလည်ရခက်မယ့်မိန်းမစိတ်အကြောင်းလေ့လာရာမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက အထောက်အကူုဖြစ်စေမှာပါ ထုံးစံအတိုင်း ပညာယူရင်းမင်းသမီးချောလေး SHEIRLYN FENNရဲ့ တစ်ကြောင်းမျဉ်းအလှတရားပေါင်းများစွာကို တ၀ကြီးတွေ့ရမှာပါ…၁၈+အခန်းပေါင်းများစွာပါသဖြင့် မိသားစုနှင့်အတူမကြည့်သင့်ပါ….File Size : (900 MB) and (380 MB) Quality ...
IMDB: 5.0/10 4,654 votes
When Sun Meets Moon ဒီကား​လေးဟာ Imdb 6.1ရထားတဲ့အချိန်​ရိုမန့်​ဇာတ်​ကား​လေးတစ်​ပုဒ်​ဖြစ်​ပါ​တယ်​.. 1992ခုနစ်​မှာ​ဟောင်​​ကောင်​မှာမုန်​တိုင်းတစ်​ခုဖြစ်​ပြီးမီး​တွေပျက်​သွားခဲ့ပါတယ်​. .ဒီလိုမီးပျက်​တဲ့အချိန်​ခဏ​လေးမှဲာကြယ်တာရာကြည့်ရှုရတာကြိုက်တဲ့ ​​​​ရွှင့်​ရိနဲ့​ကျေယွဲ့တို့ဟာ အမှတ်​မထင်​စုံစည်းခဲ့ကြပါတယ်​…သူတို့​တွေဟာ စိတ်​တူကိုယ်​တူ​တွေမို့အချင်းချင်းသံ​ယောဇဉ်​​တွေတိုးလာခဲ့ပါတယ်​.. ရွှင့်​ရိဟာ​နောက်​နှစ်​မှာနိုင်​ငံခြားကို​ပြောင်း​ရွှေ့​နေထိုင်​မှာဖြစ်​လို့ သူတို့နှစ်​ဦးဟာ​နေမင်းနဲ့လမင်းလိုပဲအချိန်​​တွေကွာခြားပြီးခွဲ​ခွာ​နေရ​​​တော့မှာပါ… သူတို့​တွေ​ဝေးကွာခြင်း​တွေကိုအံတုပြီး ပြန်​လည်​​ပေါင်းစည်းနိုင်​ပါ့မလား အရမ်းကိုရိုမန့်​ဖြစ်​တဲ့ဇာတ်​ကား​လေးဖြစ်​လို့ အချစ်​ကား​ကောင်းကြိုက်​တတ်​တဲ့သူ​တွေအတွက်​​တော့ အရမ်းကိုကြည်​နူးရမှာပါ…. Translated & Review By Phyo Zaw Encoded By LK Credit By Channel Myanmar Original Link : https://channelmyanmar.org/when-sun-meets-moon-2018/
6 Years 20156Years (2015) IMDb 5.6 Rotten Tomato 69% “ ငါ့ အသက် ၂၆ နှစ်ပြည့်ရင် ငါသူနဲ့ လက်ထပ်မယ် သူ့အတွက် ဘေဘီလေးတွေ မွေးပေးမယ်” “ နင့်ကို တစ်ရက်မတွေ့ရဘဲ ငါ မနေနိုင်ဘူး” “ နင်နဲ့ဝေးပြီး ငါမနေနိုင်ပါဘူး” အဲဒီလောက်ထိ ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူ ၂ ယောက်ရှိပါတယ်။ ဒန် နဲ့ မယ်လ်နင် တဲ့။ တက္ကဆပ်မှာနေကြတယ်။ ကလေးဘဝတည်းက ခင်မင်လာပြီး ချစ်သူသက်တမ်း ၆ နှစ်တောင် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ငယ်ချစ်တွေ။ ဘယ်သွားသွား ဘယ်လာလာ အမြဲ တပူးပူးတတွဲတွဲပေါ့။ တစ်နေ့ကျရင် လက်ထပ်ကြမယ် သာယာတဲ့အိမ်ထောင်တစ်ခု ကို ထူထောင်ကြမယ် ဆိုတဲ့ အိပ်မက်တွေကိုယ်စီနဲ့ အသက် ၂၀ကျော် Love Bird လေးတွေရဲ့ ဘဝထဲကို တစ်နေ့တော့ ဘဝရဲ့ စိန်ခေါ်စမ်းသပ်ချက်တွေ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ မယ်လ် တစ်ယောက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပါတီသွားရင်း အမူးလွန်ပြီး ဒန့် ဆီကို သွားရာကနေ စ ...
IMDB: 5.6/10 9,952 votes
Matchless Hero Fang Shiyu ( 2019 ) ကွန်ဖူးတိုက်ကွက်တွေ..တရုတ်သိုင်းကားတွေကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…ဇာတ်လမ်းအညွှန်းလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင် အရင်ခေတ်ကအနီရောင်ပန်းအဖွဲ့မှာခေါင်းဆောင်တဲ့သူတစ်ဦးဟာ အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်..ခေါင်းဆောင်မှာ ရှိဝိ လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ရှိပါတယ် ရှိဝိ ဟာ ဖခင်ကြီးအတွက်ကလဲ့စားချေဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် ဒီလိုကြိုးစားရင်းနဲ့ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်မြို့သူကြီးသမီးမျောင်မျောင်ကို ဖမ်းလိုက်ပြီးနောက်..လူသတ်သမားကိုလိုက်ရှာနေခဲ့တယ် နေရာတကာကိုသွားပီးတဲ့နောက်မှာပဲ ရှိဝိ ကိုသတ်မယ့် နောက်ထပ်လူသတ်သမားတစ်ဦးပေါ်လာခဲ့ပါတယ် သူတို့၃ဦးဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ရှိဝိ အဖေအသတ်ခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကဘာလဲ…လက်စားချေနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုပါ Translated And Review By Xiao
Matchless Hero Fang Shiyu ( 2019 )
The Secret Life of My Secretary (2019) Do Min Ik is an intelligent man and the executive ofaleading telecommunications company who always relies on his secretary, the loyal Jung Gal Hee. When Jung Gal Hee gets fired from her job she winds up assumingadouble life asafamous movie industry figure, Veronica Park, after Do Min Ik gets into an accident that leaves ...
Photograph(2019) Photograph(2019) IMDb….6.8 ဒီကုလားကားဟာ သိပ်မကြာသေးခင်ကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ကားတကားဖြစ်ပြီးတော့ The Lunch box ရုပ်ရှင်ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဒါရိုက်တာ Ritesh Batra ရိုက်ကူးထားတာပါ ရုပ်ရှင်ဟာ ဟင်ဒီကားတွေထုံးစံဖြစ်တဲ့ အကတွေ အဆိုတွေ မပါပဲ အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ old-school style drama flim အမျိုးအစားပါ ဆိုတော့ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်အကအဆိုတွေကို တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး… မွန်ဘိုင်းမြို့ ပင်လယ်ဆ်ိပ်ကမ်းအ၀င် မြို့ဦးမုဒ်ဝမှာ ဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ် အသက်မွေးတဲ့ ရာဖေး (Nawazuddin Siddiqui ) ရှိပါတယ် တနေ့မှာတော့ မယ်လိုနီ(Sanya Malhotra) ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ဟာ သူ့ဆီမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပုံထုတ်ပေးနေတုန်းမှာပဲ မယ်လိုနီ့အမေက လှမ်းခေါ်တော့ ကောင်မလေးဟာ သူ့အမေ့ဆီထွက်သွားမိပြီး ဓာတ်ပုံဖိုးရှင်းဖို့မေ့နေခဲ့တယ် ရာဖေးရဲ့ရွာမှာ ရာဖေးအဖွားကျန်နေခဲ့ပြီး အဲဒီအဖွားက သူ့မြေးကို မိန်းမယူဖို့ တဆူဆူတပူပူပေါ့ ဒါကြောင့် နားအေးပြီးရော အဖွားဆီကို သူကောင်မလေးတယောက် ရနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း စာရေးပြီး သူ့ဆီကျန်နေခဲ့တဲ့ မယ်လိုနီ့ဓာတ်ပုံကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်…. အလွယ်နည်းနဲ့ဖြေရှင်းလိုက်ပေမယ့် သူဟာ အဖွားကိုလျော့တွက်ခဲ့ပုံပါပဲ… အဲ့ဒီနောက်တော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး…. ဒီဇာတ်ကားဟာ ရုပ်ရှင်တကားကြည့်ရတာထက် စာအုပ်တအုပ်ဖတ်ရတာနဲ့ ပိုတူကောင်းတူနိုင်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းနာမည်ဟာ photograph ဆိုတဲ့ ရိုရိုးရှင်းရှင်းနာမည်လေးအတိုင်းပဲ ဇာတ်လမ်းဟာလည်း ရိုးရိုးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လူသဘာဝလေးတွေကို သေချာလေး set up လုပ် ...
Categories Select Category Action (6) Adventure (2) Comedy (2) Crime (2) Drama (4) Fantasy (1) Mystery (1) Romance (3) Thriller (3) Uncategorized (2)